I-WATERPOINT → Isicoci samanzi
Imnandi - ngexabiso eliphantsi
amanzi ekhaya kunye neshishini
Umntu uhlala enxulunyaniswa naye amanziUbomi obujolise kwimithombo yayo, amaqela emibutho yabantu ezinayo yonke imiba yobomi yavela. Izilingo namhlanje ukuveliswa kwamanzi kunye nokusasazwa zihamba kunye nezixhobo ezinzima kunye neenkqubo zetekhnoloji.
Inkampani yethu, Indawo yamanzi ibisebenza kwimarike ukusukela ngo-2004.
Nguwe kuphela osasaza iNkokheli zehlabathi zePoland kumashishini.
Okwangoku sithengisa iimveliso zeenkampani: Acuva - Izibane ze-UV ze-UV, Isithambiso - ohambisa amanzi, Elkay - baseli nemithombo yamanzi, I-Metalco - uyilo oluncinci, IValve yecala -inkokeli kwicandelo lokongamela kwendalo, imilinganiselo (umz.Ukuhamba, uxinzelelo), ukurekhodwa kwedatha kunye nokulawulwa kwenethiwekhi yokuhambisa amanzi (umz. ukunciphisa iivalves).
Siyakumema ukuba uziqhelanise nezinye iimpawu zethu: YokHumbaNgNgusha.pl yaye ShinLok.pl
inkampani Acuva yasekwa ngo-2014. Umsebenzi wayo kukusombulula iingxaki ezikhoyo, woyise izithintelo kwaye ujongane nemiceli mngeni emitsha ekunikezeleni amanzi okusela akhuselekileyo. Igxile kwiinkqubo zokubulala iintsholongwane emanzini kwindawo yokusetyenziswa, nakwiimodyuli ze-OEM. Okwangoku, zonke iinkqubo zeAcuva ziyavavanywa kwaye ziphunyezwe phantse kuwo onke amazwekazi kwihlabathi liphela.
Imbuyekezo Acuva Technologies Inc. yinkokeli yehlabathi kubuchwephesha UV-LED amanzi iintsholongwane. Bayila, baphuhlise kwaye bavelise iinkqubo eziphambili ze-UV-LED zentsholongwane kunye nesebenzayo yokubulala iintsholongwane emanzini. Injongo yenkampani kukubonelela ngokufikelela kumanzi okusela acocekileyo, nacocekileyo kubantu kwihlabathi liphela, oko ke kuqinisekisa umgangatho wobomi kubo.
Isithambiso yasekwa ngonyaka ka-1951 njengendawo yokusebenzela yintsapho encinci yokwenza isinyithi kunye nokwenza izinto zeshishini le-elektroniki.
Kule minyaka ilandelayo, imveliso yandiswa ngu iimveliso zefriji kwaye kwisiseko sazo, kuqalisa ukuvelisa ohambisa amanzi.
Okwangoku, ngumenzi woluhlu olubanzi lwezixhobo zolu hlobo, ezinomgangatho ophezulu kakhulu, izisombululo zanamhlanje zobugcisa kunye nobugcisa kunye noyilo lwangoku, ezenziwe ngezinto ezisemgangathweni, ziqinisekisa abathengi iminyaka emininzi yokusebenzisa.
Iimveliso zezithambiso zithengiswa kumazwe amaninzi kwihlabathi liphela kwaye ziyabulelwa ngomgangatho wazo.
inkampani Elkay yasungulwa ngonyaka ka-1920 kumazantsi eChicago njengecawe encinci.
Ukususela ngoko, ebesebenza ngokuqhubekayo imveliso baseli kunye neparas zamanzingaphezulu kweminyaka, ukubonisa ukhathalelo lwethu lolona mgangatho uphezulu kunye nemigangatho.
Ngoku kunjalo Inkokeli yehlabathi kule makethi, rhoqo ukwandisa ukubonelela kwabo bamkelayo, ukusoloko bekhulisa ngeemodeli ezixhotywe ngezisombululo zobugcisa zamva nje, ezinje: ngenkonzo enganxibelelani, i-Green Tricker counter, njl.
I-Metalco Ibandakanya isitayile kwaye iyaqhubeka nokuchaza inkqubo yoyilo eyaqala ngokusekwa kwayo okokuqala ngo-1984.
Namhlanje ngomnye wabavelisi abakhulu uyilo lweedolophu ezincinci emhlabeni.
Metalco kuthetha Isitayilekuba isitayile kwimveliso nganye nakuzo zonke iinkcukacha zenza ukuba iMetalco yahluke kwiMbali yoYilo, kubugcisa obutsha bokuvelisa. I-Metalco yindibaniselwano yobutofotofo ejolise kwizisombululo zendalo.
Impumelelo yezorhwebo ye-Metalco sisiphumo sophando oluqhubekayo kunye nokuvavanywa okuzinzileyo kuyilo, enkosi nakwigalelo labaqulunqi abadumileyo kunye nabaqambi abadumileyo bamazwe aphesheya, kwizixhobo ezingafunwayo zobuchwephesha kunye netekhnoloji entsha yokuvelisa.
IValve yecala uyilo kwaye lwenze oluzenzekelayo ukulawula iivalvu kushishino lwamanzi lwehlabathi.
Ukusukela ngonyaka we-1957, umqhubi wethu ongumqhubi weelaphows zefakiwe kulo lonke ilizwekazi kwihlabathi jikelele.
Nokuba lolawulo lokulahleka kwamanzi kwi-mpuma ye-Asiya, imiba yokukhuselwa kwamanzi e-Saudi Arabia, okanye iimfuno zokuhambisa kumasipala wase-US, sinikezela ngezisombululo zolawulo lwamanzi koorhulumente, ezixekweni, kumashishini nakumakhontrakthi kwihlabathi liphela .
Uninzi lweemveliso zethu ezivelisayo zizalwa zinomnqweno ongokwemvelo wokusombulula ingxaki yesicelo.
Ingxaki eveziweyo, iqela lethu leengcali kubuchwephesha bezinto ze-elektroniki, izixhobo kunye namavili olawulo azinakuphela kuphando kunye noyilo de kufumaneke isisombululo.
Jonga oopopayi boMculi >>
Abasasazi bamanzi abengezelayo babonakala rhoqo kwiinkampani, iiofisi, iiofisi nkqu nakumakhaya abantu. Isixhobo sanamhlanje sokuhambisa amanzi ...
18 Meyi 2020
Ukusela iibhotile zamanzi
Sinikezela ngeziselo zokusela zamanzi kwimfundo, kwishishini leHoReCa, ukhathalelo lwempilo, ikhaya, iiofisi, amaziko oluntu, iipaki, amaziko ...
Uxinzelelo loxinzelelo lwamanzi
Uxinzelelo loxinzelelo lwamanzi, imigaqo kunye nesihluzo kunye novavanyo loxinzelelo. Utshintsho loxinzelelo lwamanzi olwenzeka kwinkqubo yamanzi luhlala lubangelwa, phakathi kwabanye, ...
Bona iindaba ezingakumbi